Trix - egosi - MT4 Indicators
Home MT4 Indicators Trix – egosi
Trix – egosi
na-ede akwụkwọ: Raff
atụ: In order to assign the value of indicator TRIX to a variable for High price of 14 Ogwe, you should use the following code: Var1 = TRIX(High,14);
Trix – egosi bụ a Metatrader 4 (MT4) egosi na ọdịdị zuru oke nke Forex egosi bụ ịgbanwe akwakọba akụkọ ihe mere eme data.
Trix – egosi na-enye ohere ịchọpụta iche iche peculiarities na ihe nakawa etu esi na price Ọnọdụ nke na-adịghị ahụ anya na gba ọtọ anya.
Copy Trix – indicator.mq4 gị Metatrader Directory / ọkachamara / egosi /
Indicator Trix – indicator.mq4 dị na gị Chart
How to remove Trix – indicator.mq4 gị Metatrader 4 Chart?
n'isiokwuetoju - egosi
isiokwu na-esonụElekere - egosi